Nneɛma a Wubetumi Ayɛ Abɔ Wo Ho Ban Afi Yare Ho
ASƐM A ƐDA SO | BƆ WO HO BAN NA WOANYAREYARE
TETE no, nkurow pii wɔ hɔ a na wɔto afasu bɔ wɔn ho ban. Nanso sɛ ɔtamfo bi dwiriw ɔfasu no ho kakraa bi mpo a, na etumi de asɛm brɛ ɔman mũ no nyinaa. Saa ara na wo nipadua nso te. Sɛ wubenya ahoɔden o, wunnya ahoɔden o, ne nyinaa gyina wo so. Ma yɛnhwɛ nneɛma nnum bi a ebetumi ama woayare, ne nea wubetumi ayɛ abɔ wo ho ban.
ƆHAW NO: Sɛ wonom nsu a yare mmoawa wom a, wubetumi ayare.
SƐNEA WOBƐBƆ WO HO BAN: Sɛ wubetumi abɔ wo ho ban afi yare ho a, ade a ehia kɛse paa ne sɛ wobɛhwɛ nsu a wonom yiye. Wuhu sɛ baabi a wunya nsu no nyɛ anaa ɛyɛ wo sɛ biribi asɛe nsu no a, biribi wɔ hɔ a wubetumi ayɛ wɔ fie ama nsu no mu atew kama. * Hwɛ sɛ nsu a wobɛnom no wɔ ade a wubetumi akata so mu. Woresa nso a, mmfa wo nsa nto mu. Wubetumi ayɛ pipe ahyɛ ade a egu mu no ase. Wopɛ nso a pɛ kwantere na ɛyɛ a wode asa. Sɛ worekɔtena baabi a, ɛbɛyɛ yiye a pɛ baabi a ɛhɔ agyananbea no nsɛe nsu a monom.
ƆHAW NO: Sɛ wudi aduan a yare mmoawa wom a, wubetumi ayare.
SƐNEA WOBƐBƆ WO HO BAN: Aduan bi wɔ hɔ a, wuhu a wobɛka sɛ asɛm biara nni ho, nanso wudi a wobɛyare. Enti wokɔtɔ nnuaba anaa atosode a, hwɛ sɛ wobɛhohoro ho yiye. Sɛ worebɛyɛ aduan a, di kan hohoro wo nsa yiye. Nneɛma a wobɛnoa mu nso, ma emu ne ɛho nyinaa ntew. Afei baabi a wobɛyɛ aduan no, ma ɛhɔ ntew kama. Worebɛkyɛ aduan a, hohoro wo nsa kama. Nnuan bi wɔ hɔ a, worenoa a nya abotare ma no mmen yiye, na atumi akum yare mmoawa biara. Sɛ aduan nyinya anaa ani sesa a, nea ɛkyerɛ ara ne sɛ yare mmoawa wom, enti hwɛ no yiye. Sɛ wonoa aduan na ebi ka a, ntɛm ara fa hyɛ frigye mu. Woyare a, ɛnsɛ sɛ wonnoa aduan ma nkurɔfo di. *
ƆHAW NO: Ntummoa bi wɔ hɔ a, sɛ wɔwe wo anaa wosi w’aduan so a, wubetumi ayare.
SƐNEA WOBƐBƆ WO HO BAN: Ntummoa no bi pue anɔpa, ebi pue awia, ɛnna ebi nso pue anadwo. Enti edu saa bere no a, mpue abɔnten. Sɛ wubepue nso a, ɛnde hyɛ atade a ɛbɛkata wo nsa ne wo nan ho. Woreda a, fa biribi te sɛ ntontom dan bɔ wo ho ban anaa pɛ nku bi sra fa pam mmoa no. Baabi a wote nso, bɔ mmɔden sɛ woremma nsu ntaataa hɔ na ampae ntontom. *
ƆHAW NO: Mmoawammoawa bi wɔ hɔ a, sɛ wɔwɔ aboa bi mu a wɔnyɛ aboa no hwee, nanso wɔba nnipa mu a ɛma yɛyare. Sɛ afieboa anaa aboa bi ka wo, anaa otĩ wo, anaa wo nsa ka ne bin a, wubetumi ayare.
SƐNEA WOBƐBƆ WO HO BAN: Ebinom bɔ buw ma wɔn mmoa wɔ abɔnten sɛnea ɛbɛyɛ a mmoa no remma fie. Wosɔ afieboa bi mu a, fa nsu ne samina hohoro wo nsa. Bɔ mmɔden sɛ worenso wuram aboa mu. Sɛ aboa bi ka wo anaa otĩ wo a, hohoro kuro no anim yiye na kɔ ayaresabea. *
ƆHAW NO: Sɛ obi yare na onwansi anaa ɔbɔ waw gu wo so a, wo nso wubetumi ayare. Saa ara nso na sɛ ɔbam wo anaa okyia wo nsam a, wubetumi ayare. Ɛtɔ da a, yare mmoawa tumi tena nneɛma bi so. Ebi ne ɛpono nsa anaa krɔkrɔ, tɛlɛfon, remot kɔntrol, laptɔp, tablɛt, kiibɔd, ne ade a yɛso mu foro abansoro.
SƐNEA WOBƐBƆ WO HO BAN: Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ wo ne obiara kyɛ. Ebi ne oyiwan anaa blade, mpopaho, ne brɔhye a yɛde twitwiw yɛn sẽ. Hwɛ na nsu biara a efi aboa anaa nnipa ho anka wo. Saa ara nso na ɛnsɛ sɛ woma mogya anaa nneɛma a wonya fi mogya mu ka wo. Samina ne nsu deɛ, ɛho nyɛ den. Enti hwɛ sɛ wobɛtaa de ahohoro wo nsa; ɛyɛ kwampa a wubetumi afa so abɔ wo ho ban afi nyarewa ho.
Sɛ woyare na ɛbɛyɛ yiye a, tena fie. Asoɛe a ɛhwɛ bɔ nkurɔfo ho ban wɔ nyarewa ho wɔ United States ka sɛ, wopɛ sɛ wobɔ waw anaa wonwansi a, fa biribi kata w’ano anaa bɔ gu w’atade mu; mmɔ ngu wo nsam.
Tete abebusɛm bi ka sɛ: “Onitefo ne nea ohu mmusu na ɔde ne ho hintaw.” (Mmebusɛm 22:3) Yɛhwɛ sɛnea yare redi nnipa nya wɔ wiase a, yetumi hu sɛ saa asɛm yi yɛ nokware paa! Enti woyare a, kɔ ayaresabea na wɔnkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Afei di wo ho ni fa bɔ wo ho ban fi nyarewa ho. Yɛ nea wubetumi biara fa bɔ wo ho ban na woanyareyare!
^ nky. 6 Asoeɛ a ɛhwɛ nnipa akwahosan so wɔ wiase (World Health Organization) akyerɛ nneɛma bi a wubetumi ayɛ ama wo nsu mu atew, na woanyare. Wubetumi asɔn nsu no so, anaa wode chlorine agu mu. Wopɛ nso a noa, anaa fa si awia mu.
^ nky. 9 Wopɛ sɛ wuhu sɛnea wobɛbɔ w’aduan ho ban a, hwɛ July 2012 Nyan! no, kratafa 3-9.
^ nky. 12 Wopɛ sɛ wuhu nea wobɛyɛ na woannya atiridii (malaria) a, hwɛ July 2015 Nyan! no, kratafa 14-15.
^ nky. 15 Aboa a n’ano wɔ bɔre ka wo anaa otĩ wo a, kɔ ayaresabea ntɛm.
Sɛ Yare Bi Tu Atese a, Wobɛyɛ Dɛn Abɔ Wo Ho Ban?
Afe 2014 mu no, Ebola yare trɛw faa Afrika Atɔe Fam maa wiase nyinaa tee ho asɛm. Yehowa Adansefo a wɔwɔ hɔ bɔɔ ho dawuru, na wɔkyerɛɛ nea nkurɔfo betumi ayɛ abɔ wɔn ho ban. Wobisabisaa Adansefo no mpanyimfo nsɛm bi. Yɛnhwɛ nea wɔkaa wɔ ho.
Yenim sɛ yare no yɛ hu, moyɛɛ dɛn boaa nkurɔfo ma wohuu yare no ani so?
Ná nkurɔfo abɔ hu, enti yedii kan kaa wɔn koma too wɔn yam. Yɛmaa ɔkasa, na yɛyɛɛ ɔyɛkyerɛ de kyerɛɛ sɛnea yare no trɛw ne nea nkurɔfo betumi ayɛ abɔ wɔn ho ban.
Mo Yehowa Adansefo nso, moyɛɛ dɛn bɔɔ mo ho ban?
Sɛ yɛn nuanom reba asafo nhyiam a, na yɛde afiri bi hwɛ sɛnea obiara ho te; ɛma yehu sɛ ebia obi ho adɔ anaa. Afei na obiara hwɛ sɛ ɔremfa ne ho ntwitwiw ne yɔnko, ɔrenyɛ ne yɔnko atuu anaa ɔrenkyia ne nsam. Ade baako a na yenni ho agorɔ nso ne sɛ, bere nyinaa na yɛhohoro yɛn nsa. Yɛde nsu a yɛde aduru (bleach) asom sisii mmeaemmeae sɛnea ɛbɛyɛ a obiara betumi ahohoro ne nsa.
Mo a mommfa mo adesua ne mo asɛnka nni agorɔ yi, ɛbaa saa no moyɛɛ dɛn?
Mmeae bi wɔ hɔ a, na aban no mma kwan sɛ kuw biara behyia, enti yegyaee kakra maa abusua biara yɛɛ ne deɛ wɔ fie. Wɔn a yɛne wɔn sua Bible nso, na yɛfrɛ wɔn tɛlɛfon so.
Muhu sɛ obi reyɛ anya yare no bi nso ɛ?
Ɛba saa a, yɛbɔ aban mpanyimfo amanneɛ. Sɛ obi nya Ebola na obi so ne mu, anaa owu na obi kɔ n’ayi, anaa yehu sɛ obi reyɛ anya yare no bi a, yeyi no fi nnipa mu de no kosie baabi nnawɔtwe mmiɛnsa. Nnawɔtwe mmiɛnsa no nkɔ awiei deɛ, sɛ onii no wɔ Ebola no bi a, ebeyi ne ho.